1 . A Chit Sit Yae Tan Phoe Ver2 - Ma Naw
2 . Mulalayphyar - Wai La G Latt Han Htun Tha O(4 Element)
3 . A Chit Sit Yae Tan Phoe V3 - Ma Naw
1 . DIY (Do It Yourself)
2 . MyMusic (ရေပန်းစားသီချင်းဝန်ဆောင်မှု)
3 . MyMTV
1 .5ရာခိုင်နှုန်း Discount - Aroma
2 . ၁သိန်းဖိုးနဲ့အထက် Delivery free - Sushi House
3 . Collect point card and get rewards - Eatfinity
1 . ဧပြီလ ၂၄ရက်နေ့ ၇ရက်သားသမီး ဗေဒင်
2 . ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ့အတွက် ရာသီခွင်အလိုက်ဗေဒင်ဟောစာတမ်း
3 . ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ့ ပျိုရွယ်သူတို့အတွက် ချစ်ရေးချစ်ရာ ဘ၀တွက်တာဗေဒင်
1 . အဝိဇ္ဖာတောလား - အစ/အဆုံး
2 . လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်တစ်သန်းက ကြယ်တွေ - အစ/အဆုံး
3 . အဲဒီနေ့က ကျွန်မ ခရီးထွက်နေခဲ့တယ် - Chapter1
1 . မိန်ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်တတ်တဲ့စိတ်က ယောင်္ကျားလေးတွေထက်ပိုနိုင်လား
2 . သုတ်​ရည်​ကိုဘယ်​အချိန်​မျိုးမှာထုပ်​ဖို့ အသင့်​​တော်​ဆုံးလဲ?
3 . မိန်းကလေးတွေက အချစ်စစ်ကိုပိုပြီမြတ်နိုးကြတာမှန်ရဲ့လား
ထိပ်ဆုံးစာမျက်နှာ > မေးကြမယ် ဖြေကြမယ်
ဒီserviceကိုSIM Slot1မှာထည့်ထားသောMPT 3G/4Gလိုင်းကိုသုံး၍ user loginဝင်ပြီးအသုံးပြုပေးပါရန်။ အသုံးပြုပုံ
“မေးကြမယ် ဖြေကြမယ်” ဆိုတာဘာလဲ?
MKMPKM Support မှ အောက်တိုဘာ 31, 2016 မေးခဲ့သည်
MKMPKM Support မှ ဇန်နဝါရီ 9, 2017 ပြန်ဖွင့်ခဲ့သည်
မေးခွန်းဖြေဆိုရန်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ အကောင့်ဖြင့်ဝင်ရောက်ပေးပါ
ဖြေကြားခဲ့သည် MKMPKM Support မှ
“မေးကြမယ် ဖြေကြမယ်” အကူအညီဖြင့် သင့်အွန်လိုင်းက သူငယ်ချင်းများနဲ့ ဗဟုသုတတွေ ကို ဖလှယ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သင်သိချင်တဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုခုကိုပဲဖြစ်ဖြစ် တခြားဆွေးနွေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာများကိုပါ သင့်ရဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်က သူငယ်ချင်းများနဲ့ မေးမြန်းခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းများကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ “မေးကြမယ် ဖြေကြမယ်”ဆိုတာ အရမ်းကို အသုံးဝင်တဲ့ ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကဏ္ဍကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဗဟုသုတတွေ အများကြီးကိုလည်းရှိနိုင်ပါသည်။
ယခင် 18 မှတ်ချက်ကိုပြပါ
Khin Lay မှ ဒီဇင်ဘာ 10, 2016 မေးခဲ့သည်
Mg Lwin Soe မှ ဒီဇင်ဘာ 10, 2016 မေးခဲ့သည်
Thiha AyeKyaw မှ ဒီဇင်ဘာ 10, 2016 မေးခဲ့သည်
Ko Ko (12) မှ ဒီဇင်ဘာ 24, 2016 မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်
မှတ်ချက်ရေးရန်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ အကောင့်ဖြင့်ဝင်ရောက်ပေးပါ
“မေးကြမယ် ဖြေကြမယ်” ကို ဘယ်လိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မလဲ?
MKMPKM Support မှ အောက်တိုဘာ 31, 2016 မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်
MKMPKM Support မှ နိုဝင်ဘာ 2, 2016 ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားခဲ့သည်
လိုတရ ရဲ့ ပင်မစာမျက်နှာမှ “မေးကြမယ် ဖြေကြမယ်” ကို နှိပ်၍ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ “မေးကြမယ် ဖြေကြမယ်” မှ မေးခွန်းများကို နောက်ဆုံးတင်ထားသောနေ့မှ စ၍ စီစဉ်ပြီးပြထားပါသည်။
မေးခွန်းများကို “မကြာသေးခင်က ၊ နာမည်ကြီး ၊ မဲအများဆုံး ၊ အဖြေအများဆုံး ၊ အကြည့်အများဆုံး” စသည့် အဖွဲ့များဖြင့်လည်း ရွေးချယ်၍လည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ထို့ပြင် “ဖြေကြားထားသူမရှိပါ ၊ တွဲထားသောအရာများ” စသည့် အဖွဲ့များဖြင့်လည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ “တွဲထားသောအရာများ” ကို ရွေးချယ် ကြည့်ရှုပါက တွဲထားသောစကားလုံးလေးများကို တွေ့မြင်ရမှာပြီး သင်နှစ်သက် စိတ်ဝင်စားသော စကားလုံးကိုရွေးချယ်၍ သက်ဆိုင်ရာမေးခွန်းများကို ကြည့်ရှုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
“မေးကြမယ် ဖြေကြမယ်” မှ မေးခွန်းများကို နှစ်သက်ရာ စကားလုံးများဖြင့် ဘယ်လိုရှာကြမလဲ?
“ရှာဖွေမည့် စကားလုံးရိုက်ထည့်ပါ” နေရာတွင် သင်နှစ်သက်ရာ စကားလုံးကို ရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ မေးခွန်းကို ရှာနိုင်ပါသည်။ စကားများရှာဖွေရာတွင် ဇော်ဂျီဖောင့် နှင့် အင်္ဂလိပ်စာ တို့ကိုသာ အသုံးပြု၍ ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
Nay Nay မှ နိုဝင်ဘာ 9, 2016 မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်
ရိုးရှင်းသော ဘဝ မှ နိုဝင်ဘာ 18, 2016 မေးခဲ့သည်
tun win မှ ဒီဇင်ဘာ 10, 2016 မေးခဲ့သည်
“မေးကြမယ် ဖြေကြမယ်” မှာ မေးခွန်းများ (သို့မဟုတ်) ဆွေးနွေးမှုများ ကို အွန်လိုင်းမှ သူငယ်ချင်းများနှင့် ဘယ်လိုဖလှယ်ရမလဲ?
“မေးကြမယ် ဖြေကြမယ်” မှာ မေးခွန်းများ (သို့မဟုတ်) ဆွေးနွေးမှုများ ကို အွန်လိုင်းမှ သူငယ်ချင်းများနှင့် ဖလှယ်ရန် ပထမဦးစွာ အကောင့်ဖြင့်ဝင်ရောက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အကောင့်ဖြင့်ဝင်ရောက်ပြီးပါက “တစ်ခုခုမေးလိုပါသလား” ခလုတ်ကိုနှိပ်၍ မေးခွန်းများကို တင်နိုင်ပါသည်။ ခလုတ်နှိပ်ပြီးပါက သင့်ရဲ့ မေးခွန်းများ ဖြည့်စွက်နိုင်သော ဖောင်ဖော်ပြလာမည်ဖြစ်ပြီး ထိုဖောင်တွင် သင့်ရဲ့ မေးခွန်းများ (သို့မဟုတ်) ဆွေးနွေးမှုများကို ထည့်သွင်းပါ။ ထို့နောက် “မေးခွန်းမေးပါ” ခလုတ်အားနှိပ်၍ သင့်ရဲ့ မေးခွန်းများ (သို့မဟုတ်) ဆွေးနွေးမှုများကို သင့်ရဲ့ အွန်လိုင်းမှ သူငယ်ချင်းများနှင့် စတင်ဖလှယ်နိုင်ပါသည်။
သင့်ရဲ့ မေးခွန်း (သို့မဟုတ်) ဆွေးနွေးမှု တွင် တွဲထားသောအရာများ ဆိုတာ ဘာလဲ?
တွဲထားသောအရာများ ဆိုသည်မှာ သင့်ရဲ့ မေးခွန်း (သို့မဟုတ်) ဆွေးနွေးမှုအား အဓိက စကားလုံးလေးများဖြင့် စိတ်ဝင်စားဖွယ် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဖော်ပြချင်သော အခါတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သင့်ရဲ့ မေးခွန်း (သို့မဟုတ်) ဆွေးနွေးမှုတွင် စကားလုံး တစ်လုံးမက ထည့်သွင်း၍ တွဲထားနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် သင့်ရဲ့မေးခွန်းသည် “အောင်မြင်သောဘ၀ ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ” ဆိုပါစို့။ သင့်ရဲ့ မေးခွန်း (သို့မဟုတ်) ဆွေးနွေးမှု ကို “အောင်မြင်မှု ၊ ဘ၀” ဆိုသော စကားလုံးလေးများကို တွဲပြီး စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။
“မေးကြမယ် ဖြေကြမယ်” တွင် တင်ထားသော မေးခွန်းများ (သို့မဟုတ်) ဆွေးနွေးမှုများ တွင် ဘယ်လို ၀င်ရောက်ဖြေဆိုနိုင်မလဲ (သို့မဟုတ်) ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မလဲ?
“မေးကြမယ် ဖြေကြမယ်” တွင် တင်ထားသော မေးခွန်းများ (သို့မဟုတ်) ဆွေးနွေးမှုများကို ၀င်ရောက်ဖြေဆိုရန် သင်နှစ်သက်ရာ မေးခွန်းတစ်ခု အောက်တွင်ရှိသော “အဖြေ” ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ ထို့နောက် သင့် အဖြေ (သို့မဟုတ်) ဆွေးနွေးမှု ကို ရိုက်ထည့်ပြီး “အဖြေကိုရေးပါ” ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး တင်နိုင်ပါသည်။ သင့် အဖြေ (သို့မဟုတ်) ဆွေးနွေးမှု ကိုလည်း “ပယ်ဖျက်ရန်” ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး ဖျက်နိုင်ပါသည်။
“မေးကြမယ် ဖြေကြမယ်” တွင် တင်ထားသော မေးခွန်း (သို့မဟုတ်) ဆွေးနွေးမှု တစ်ခုမှ အဖြေကို မှတ်ချက် ဘယ်လိုရေးမလဲ?
“မေးကြမယ် ဖြေကြမယ်” တွင် တင်ထားသော မေးခွန်း (သို့မဟုတ်) ဆွေးနွေးမှု တစ်ခုမှ အဖြေကို မှတ်ချက်ပေးရန် အဖြေ တစ်ခုခြင်းစီအောက်တွင် ရှိသော မှတ်ချက် ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက် သင့် မှတ်ချက်ကို ရိုက်ထည့်ပြီး “မှတ်ချက်ရေးပါ” ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး တင်နိုင်ပါသည်။ သင့် မှတ်ချက် ကိုလည်း “ပယ်ဖျက်ရန်” ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး ဖျက်နိုင်ပါသည်။
rakhine thar မှ ဒီဇင်ဘာ 9, 2016 မေးခဲ့သည်
“မေးကြမယ် ဖြေကြမယ်”တွင် လူမှု့ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် မသင့်တော်သော မဖော်ပြသင့်သော မေးခွန်းများကို တွေ့ရှိပါက ဘယ်လို အကြောင်းကြားနိုင်မလဲ?
“မေးကြမယ် ဖြေကြမယ်”တွင် လူမှု့ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် မသင့်တော်သော မဖော်ပြသင့်သော မေးခွန်းများကို တွေ့ရှိပါက မေးခွန်းအောက်တွင်ရှိသော တိုင်ကြားရန် ခလုတ်ကို နှိပ်၍တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်။
Koaung Maga မှ ဇန်နဝါရီ 16, 2017 မေးခဲ့သည်
သက်ဆိုင်ရာမေးခွန်း ဆိုတာ ဘာလဲ?
သက်ဆိုင်ရာမေးခွန်း ဆိုတာ ခုလက်ရှိသင်ကြည့်နေသော မေးခွန်းနှင့် ဆင်တူ (သို့မဟုတ်) ဆက်စပ်မှု ရှိသော မေးခွန်းမျိုးကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် မေးကြမယ် ဖြေကြမယ်တွင် “အောင်မြင်သောဘ၀ဆိုတာဘာလဲ” ဆိုသောမေးခွန်းမျိုးရှိတယ် ဆိုပါစို့။ သင်လည်း “အောင်မြင်သော ဘ၀မျိုး ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ” ဆိုသော မေးခွန်းမျိုး မေးချင်တယ် ဆိုပါစို့။ သင့်မေးခွန်းကို “အောင်မြင်သောဘ၀ဆိုတာဘာလဲ” ဆိုသော ပင်မမေးခွန်းတွင် သက်ဆိုင်ရာမေးခွန်း အဖြစ်ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
သက်ဆိုင်ရာမေးခွန်းကို သက်ဆိုင်ရာ မေးခွန်းမေးပါ ခလုတ်ကို နှိပ်၍ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ မေးခွန်း ထည့်သွင်းပုံ အဆင့်ဆင့်မှာတော့ ပုံမှန်မေးခွန်း ထည့်သွင်းပုံ အဆင့်ဆင့် နှင့် အတူတူပဲဖြစ်ပါသည်။
"မေးကြမယ် ဖြေကြမယ်" တွင် တင်ထားသော မေးခွန်းများ (သို့မဟုတ်) အဖြေများ ကို ဘယ်လို မဲပေးနိုင်မလဲ?
"မေးကြမယ် ဖြေကြမယ်" တွင် တင်ထားသော မေးခွန်းများ (သို့မဟုတ်) အဖြေများ ကို "မဲ" ခလုတ်နှိပ်၍ မဲပေးနိုင်ပါသည်။ အပေါ်သို့ပြထားသော မျှားခလုတ်ကို နှိပ်၍ ကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်း (သို့မဟုတ်) လက်ခံကြောင်း မဲပေးနိုင်ပါသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါက အောက်သို့ပြထားသော မျှားခလုတ်ကို နှိပ်၍ လည်း မဲပေးနိုင်ပါသည်။
Khin Wutyi Moe မှ ဒီဇင်ဘာ 9, 2016 မေးခဲ့သည်
ပညာ ​ရေး
မေးကြမယ် ဖြေကြမယ် တွင် “My Page” ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုနိုင်မလဲ?
MKMPKM Support မှ ဒီဇင်ဘာ 12, 2016 မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်
မေးကြမယ် ဖြေကြမယ်တွင် “My Page” ကို အသုံးပြုရန် သင့်အကောင့်နာမည်တွင် နှိပ်ပါ။ “My Page” တွင် သင့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပက်သက်သော အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ အရေအတွက်များ ကို ပြထားပါသည်။
မေးထားသော မေးခွန်းများကို ဘယ်လိုပြန်ကြည့်ရှုနိုင်မလဲ?
မေးထားသော မေးခွန်းများကို “My Page” စာမျက်နှာတွင်ရှိသော ရွေးချယ်စရာနေရာတွင် “မေးခွန်းအားလုံး” ကိုရွေးချယ်ပြီး ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
တခြားသော လှုပ်ရှားများဖြစ်သည့် ၁) အဖြေအားလုံး ၂) မဲပေးထားသော ၃) မကြာမီက စသည့်တို့ကို အလားတူ လုပ်ဆောင်ချက်မျိုး လုပ်ဆောင်ပြီး ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
သင့်အကောင့်အား “အကောင့်အားပြင်ရန်” ခလုပ်ကိုနှိပ်ပြီး ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ် နှစ်သက်သော (သို့မဟုတ်) မနှစ်သက်သော မေးခွန်းများ (သို့မဟုတ်) အဖြေများကို မည်သို့ မှတ်ထားပြီး ပြန်လည် ကြည့်ရှုနိုင်မည်နည်း?
သင် နှစ်သက်သော (သို့မဟုတ်) မနှစ်သက်သော မေးခွန်းများ (သို့မဟုတ်) အဖြေများကို မဲပေး၍ မှတ်ထားပြီး “My Page” စာမျက်နှာတွင်ရှိသော ရွေးချယ်စရာနေရာတွင် “မဲအားလုံး” ကိုရွေးချယ်ပြီး ပြန်လည် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
မေးကြမယ်ဖြေကြမယ် ပင်မစာမျက်နှာသို့ပြန်သွားရန် >>
Copyright © 2016 MPT. All rights reserved.